Zebras Dazzle B&B | Indawo yokuthula - I-Airbnb
Zebras Dazzle B&B | Indawo yokuthula
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Assia
U-Assia uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Assia izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Itholakala endaweni eluhlaza okotshani e-Chinhoyi, i-Zebras Dazzle inikeza ucezu oluhle lokuzola, nokugcizelela ekudleni okuhamba phambili nokudla okulinganiselwe kokuqala. I-B&B yethu enamakamelo angu-4 anetimu iyisiphepho esinomoya kuwo wonke umuntu owazisayo ukwamukela izivakashi okungokoqobo.
Siyayikhathalela indawo ezungezile futhi senze i-B&B yafanela indawo ezungezile. Ngaphezu kokusetshenziswa kwamaphaneli elanga, sisebenzisa imikhiqizo engokwemvelo evela kubalimi bendawo futhi ulala ngaphansi kweduvethi eyenziwe ngoqalo.
Ukuma phakathi nohambo lwakho noma ukuze uphumule
Ikamelo 24 yigumbi elikhanyayo nelingokwemvelo elinegumbi lokugezela elingaphakathi kwekamelo lapho uthola i-shower yemvula nomcengezi ovulekile.
Uzolala njengama-rose ebhokisini eliphakeme lobukhulu bebhokisi elimboziwe ngaphansi kwamashidi amhlophe ahlanzekile kanye ne-duvet ye-bamboevet. Ukubukeka kwengadi kukunika umuzwa wangempela 'wokuthula'. Ingadi enkulu iyikhaya lezinhlobo eziningi zezinyoni namabhotela. Lapha ungaphumula futhi ujabulele okuluhlaza okukuzungezile.
Isidlo sasekuseni sifakiwe futhi senziwe ngemikhiqizo engokwemvelo etholakala kubalimi bendawo abancane ukuze bayisekele, izithelo nemithi evela engadini yethu, isidlo seqanda, izinkwa ne-yoghurt.
I-Zebras Dazzle isesifundeni esidumile se-Orange Grove, esaziwa ngezindawo eziluhlaza nokuzola. Indawo yedolobha iphakathi nebanga lokuhanjwa ngezinyawo. Imihume edumile yase-Chinhoyi ingamakhilomitha angu-5 ukusuka kithi.
Sisevisi yakho 24/7 ukukunikeza ukuhlala nokuhlangenwe nakho okungcono kakhulu.